I-China iyalela ukuvalwa kwensiza yase-US eningizimu-ntshonalanga yedolobha laseChengdu - teles
I-China iyalela ukuvalwa kommeli wase-US eningizimu-ntshonalanga yedolobha laseChengdu
I-China iyalele ukuvalwa kwensiza yaseMelika eningizimu-ntshonalanga yedolobha laseChengdu, ekwandeni kwe-tit-for-tat phakathi kwalawa mazwe amabili.
I-China ithe lesi sinyathelo siphendula ukuvalwa kwenxusa laseMelika eHouston futhi lasola abasebenzi bakwaChengdu ngokungangeneleli ezindabeni zalo zangaphakathi.
UNobhala Wezwe, uMike Pompeo, uthe isinqumo seMelika senziwa ngoba iChina "intshontsha" impahla yobuhlakani.
Ukungezwani kukhuphuke phakathi kwe-United States neChina ngaphezulu kwezinkinga eziningi ezibalulekile.
Ukuphatha kukaMongameli uDonald Trump kungqubuzana kaningi eBeijing mayelana nokuhweba kanye nobhubhane lwe-coronavirus, kanye nokubekwa kweChina umthetho wokuphepha omusha ophikisayo eHong Kong.
IWashington ngoLwesihlanu inxuse iChina ukuthi "iyeke lezi zenzo ezinobungozi kunokuba ibandakanyeke ekuzibuyiselweni kwe-tit-for-tat."
Ukuhamba kweChina kufike ngemuva kokuthi uPompeo eguqule izwi lakhe enkulumweni ngoLwesine emtapo wezincwadi walowo owayenguMongameli uRichard Nixon, ukuhambela kwakhe izwe laseChina ngo-1972 kwazisa isikhathi sokwenza ngcono ubudlelwane.
"Namuhla, i-China igcwele ngokwamandla ezweni layo futhi inolaka ekulweni nayo enkululekweni kwenye nenye indawo," kusho uPompeo.
“Umhlaba okhululekileyo kumele unqobe kulobu bushiqela obusha. "
UMnyango Wezangaphandle eChina ngoLwesihlanu uthe uvala izikhulu zaseMelika eChengdu ngemuva kokuba abasebenzi balelo lizwe "bangenelela ezindabeni zangaphakathi zaseChina futhi babeka engcupheni ezokuphepha kanye nezintshisekelo zesizwe. China ”.
Esithangamini nabezindaba, okhulumela uMnyango uWang Wenbin naye ukusho lokho Isinqumo saseMelika sokuvala isikhundla sokuya eHouston kwakususelwa "kumaphutha wamanga ama-anti-Chinese".
Uthe isimemezelo sikaMnu Pompeo ngoLwesine "sigcwele ubandlululo kanye nomqondo weCold War".
"UPompeo wethule inkulumo lapho ethula khona ihlaselo elinonya ngeqembu lamaKhomanisi aseChina," kusho uWang, wengeza ngokuthi, "Kuleli China lizwakalisa ukuthukuthela okukhulu nokuqina okuphikisayo."
I-copyright yezithombeIMAGAMA YEZIKHATHI
legendIkhomishini yaseMelika eChengdu iqashe abantu abangaphezu kwama-200, iningi labo eliqashwa endaweni
Inkonzo ithe phambilini ukuvalwa kwenxusa laseMelika eChengdu kwakuyimpendulo esemthethweni nefanele yezinyathelo ezithathwe yiMelika.
"Isimo esikhona phakathi kweChina ne-United States siyinto China engafuni ukuyibona, futhi ne-United States ithwele wonke umthwalo wemfanelo. "
I-China inikeze i-United States kuze kube uMsombuluko ukuvala umbuso wamakhosi eChengdu, ngokusho komhleli we-Global Times yaseChina.
Lo msebenzi, owasungulwa ngonyaka we-1985 futhi njengamanje uqasha abasebenzi abangaphezu kuka-200 - abangama-150 lapho beqashwa khona - kuthathwa njengento ebaluleke kakhulu ngoba yenza iMelika ikwazi ukuqoqa imininingwane mayelana neSifunda saseTibet Autonomous, lapho kunengcindezi ekhona. yenkululeko.
Ngomkhakha wawo okhulayo wezimboni kanye nezinsizakalo, iChengdu nayo ibonwa yiMelika ukunikela ngamathuba okuthumela ngaphandle kwemikhiqizo yezolimo, izimoto nemishini.
Kungani i-United States yayala ukuthi kuvalwe ummeli waseChina?
NgoLwesibili, uhulumeni wase-U.S. uyalele iChina ukuthi ivale amanxusa ayo eHouston, eTexas, ngoLwesihlanu.
Lesi sinyathelo size ngemuva kokuthi abantu abangaziwa ukuthi baboshwe ephepheni lekhamera lishise imigqomo egcekeni lesakhiwo.
Isihloko semidiyaAbesilisa bahlungwa besebenzisa i-hose futhi bevala amathini kadoti ekhomishini yaseChina eseHouston
UMnu Pompeo usole iChina ngokweba "hhayi impahla ye-American kuphela ... kodwa futhi nempahla yobuhlakani baseYurophu ... kubiza amakhulu ezinkulungwane zemisebenzi".
"Silindele ukuthi iqembu lamaKhomanisi laseChinese liziphathe kanjani. Futhi uma kungenzeki, sizothatha isinyathelo, ”kusho yena.
IKhomishini yaseChina eseHouston ibingomunye wabathuthukisi abahlanu eMelika, kanye neNxusa eWashington DC. Asazi ukuthi kungani akhethwa.
Umkhulumeli woMnyango Wezangaphandle eChina uthe izizathu ezinikezwe yi-United States zokuvalwa kombuso "zihlekisa ngokungakholeki."
U-Hua Chunying unxuse i-United States ukuthi isiguqele "isinqumo sayo esingalungile", ngaphandle kwalokho iChina "izosabela ngokuqinile okuqinile".
Kwenye inhlangano yaseMelika, abantu abane baseChina babekwe amacala enkohliso ye-visa ngezinsolo zokuqamba amanga ngobulungu babo embuthweni wamasosha waseChina. Iziphathimandla zaseMelika zitshele izintatheli ngoLwesihlanu ukuthi umfundi waseChina obalekele kwinxusa laseChina eSan Francisco manje usubanjelwe e-United States. Abanye abathathu baboshwa phambilini.
Ngokwehlukana, owaseSingapore wavuma enkantolo yenkantolo eWashington ukuthi asebenze njengommeli kahulumeni waseChina ongekho emthethweni, uJohn Demers, iPhini likammeli Jikelele wezokuphepha kuzwelonke, ngoLwesihlanu.
UJun Wei Seo, owaziwa nangokuthi uDickson Seo, usolwe ngokusebenzisa ubuhlakani bakhe bezepolitiki e-United States ukuqoqa imininingwane yobuhlakani baseChina.
Kungani kukhona ukungezwani phakathi kweChina ne-United States?
legendUMongameli waseMelika uDonald Trump nomlingani wakhe waseChina uXi Jinping
Kunezinto ezimbalwa ezisengcupheni .. Izikhulu zaseMelika ziye zasola iChina ngokusatshalaliswa komhlaba jikelele kweCovid-19. Ngokuqondile, uMongameli uTrump uye wasola, ngaphandle kobufakazi, ukuthi leli gciwane livela elabhorethri laseChina eWuhan.
Futhi, emazwini angenakuthenjwa, okhulumela uMnyango Wezangaphandle WaseShayina ngoMashi wathi amasosha ase-US kungenzeka alethe leli gciwane eWuhan.
Izwe laseMelika kanye neChina nalo lalivaleleke empini yemali ekhokhwayo kusukela ngonyaka ka-2018.
UMnu uTrump kudala wasola iChina ngezenzo ezingalungile zokuhweba kanye nokwebiwa kwempahla enobuhlakani, kepha eBeijing kuzwakala sengathi iMelika izama ukunqanda ukukhuphuka kwayo njengamandla ezomnotho emhlabeni jikelele.
Izwe laseMelika liphinde labeka unswinyo kosopolitiki baseChina abathi bathi banecala lokwephulwa kwamalungelo abantu okuphikisana namaSulumane amancane eXinjiang. I-China isolwa ngokugqunywa ejele okukhulu, ukushushiswa ngokwenkolo, nokuqinisa inzalo kuma-Uyghurs nabanye.
IBeijing iyaziphika lezi zinsolo futhi isisole iMelika "ngokungenelela okuyihlazo" ezindabeni zayo zangaphakathi.
Kuthiwani ngeHong Kong?
Ukufakwa kuka-China komthetho wokuphepha okhukhumayo nakho kuyimbangela yezingxabano ne-US kanye ne-UK, ebuse le ndawo kuze kube ngu-1997.
Ekuphenduleni, I-United States yabuyisa isimo esikhethekile sokuhweba saseHong Kong ngeledlule , okuvumele lokho ukuthi kugweme amanani entela emikhiqizo yaseChina yi-United States.
I-US ne-UK zibheka umthetho wokuphepha njengosongo kwinkululeko uHong Kong ayijabulele ngaphansi kwesivumelwano se-1984 China-UK - ngaphambi kokuba ubukhosi babuyise eBeijing.
Izwe lase-UK lithukuthelise iChina ngokuchaza indlela eya kwisakhamuzi saseBrithani cishe sabalelwa ezigidini zaseHong Kong.
I-China iphendule ngokusongela ukuyeka ukubona uhlobo lwephasiphothi yaseBrithani - i-BNO - ephethwe ngamanani amakhulu abantu abahlala eHong Kong.
Lo mbhalo uvele okokuqala ku: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53522640?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting- indaba
Amadoda ayishumi alahlwe yicala lokudlwengula kwezigebengu eJalimane
IMATCHDAY: Usuku lokugcina lwePremier League; UJuve angasayina isihloko